theZOMI: [mrsorcerer:37685] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] စာရေးဆရာမကြီး (ဒေါ်) ရွှေကူမေနှင်းသို့ တုန့်ပြန်ချက်
[mrsorcerer:37685] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] စာရေးဆရာမကြီး (ဒေါ်) ရွှေကူမေနှင်းသို့ တုန့်ပြန်ချက်
Subject: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] စာရေးဆရာမကြီး (ဒေါ်) ရွှေကူမေနှင်းသို့ တုန့်ပြန်ချက်
by Seaman Nayminthu (Notes) on Sunday, March 24, 2013 at 9:46pm
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ၊ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက် အမှတ် (၄/၂၀၁၃)၊ (၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၁ ရက်)
အထက်ပါ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အပြည့်အစုံကို ၁၂- ၃- ၂၀၁၃ နေ့ထုတ် သတင်းစာတွင် ဖော်ပြခဲ့ခြင်းကို ဖတ်ရှုရသည်။
"အပြည့်အစုံ" သည် ရှည်လျားလှ၏။ အချို့နေရာများတွင် အကြောင်းအရာများ "ပွရောင်း"ပြီး ထပ်နေသည်။ လိုလည်း တွေ့ရ၏။ ခြုံ၍ကြည့်သောအခါ "အဖြေပေးထားသော သင်္ချာတပုဒ်ကို အဖြေမှန် မရ ရအောင် တွက်ထားသောနည်း" ဟု မြင်ပါသည်။
မဏ္ဍိုင် ၃ ရပ်အား တည့်မတ်ပေးရမည် ဆိုသော စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်၏ တာဝန်အရ အထက်ပါ အစီရင်ခံစာကို ထောက်ပြရပါမည်။
(၁) ဒေသခံ လူထုသည် မြေယာသိမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထိုက်သင့်သည့် လျော်ကြေးငွေ မရရှိသဖြင့် လည်းကောင်း၊ ထိုက်သင့်သော အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရရှိခြင်းကြေင့် လည်းကောင်း မကျေ မနပ်ဖြစ်ကာ ဆန္ဒပြမှုများ စတင် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မြေယာသိမ်းဆည်းရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းများက ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ရှင်းလင်းပြခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် ဒေသခံများက သီးနှံအတွက် လျော်ကြေးသာ ပေးသည် ထင်မြင်ယူဆခဲ့ ပါသည်။ ထိုသို့ လျော်ကြေးပေးရာတွင်လည်း ၀န်ထမ်းအချို့က ပြေပြေလည်လည် ပြောဆိုဆက်ဆံမှု မရှိခြင်းကြောင့် ပြဿနာ ပိုမိုကြီးထွားလာပါသည်။ ထိုအခြေအနေ တွင် ဒေသပြင်ပက အဖွဲ့အစည်းများကလည်း ရောက်ရှိလာကာ ဆန္ဒပြမှုများ အရှိန်မြင့်
(၆) လက်ပံတောင်း တောင်ကြား တောရစင်္ကြန်ကျောင်း ဟုခေါ်သော မြေနေရာနှင့် ၎င်းအပေါ်ရှိ စေတီ၊ သိမ်၊ ကျောင်း စသော ဗုဒ္ဓ သာဿနိက အဆောက်အအုံ များသည် လက်ပတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းတွင် အလယ်ဗဟို၌ တည်ရှိပြီး သတ္တုသိုက် တည်ရှိရာ အဓိကနေရာ ဖြစ်ကြောင်း …. လက်ရှိ အနေအထားအတိုင်း အခြားသင့်တော်မည့် နေရာတခုခု သို့ ပြောင်းရွှေ့ပေးသင့်ကြောင်း။ (အပိုဒ် ၊ ၈၃ (ဂ) )
သည်လိုဆိုလျှင် အကယ်၍ ရွှေတိဂုံစေတီကြီး တည်ရှိရာ သိဂုတ္တရတောင်အောက်၌ စိန်တွင်းကြီးရှိသည်ဟု နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီများက လာရောက် တူးဖေါ်ချင်လျှင် ရွှေတိဂုံစေတီကြီးကို ရွှေ့ပစ်ကြမှာလား။
အထက်ပါ စာစုလေးကို ဖတ်ရှုပြီးသောအခါ ကျနော် မင်တက်မိ ငေးငိုင်သွားရသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးတို့၏ ရင်တွင်း အဇ္ဖျတ္တ သန္တာန် ၌ လယ်တီ ဆရာတော်ဘုရားကြီး နှင့် မြတ်စွာဘုရားသခင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ထပ်တူပြု နှိုင်းယှဉ်၍ ရနိုင်မည်ဆိုလျှင်…. သိဂုတ္တရတောင် နှင့် လက်ပံတောင်းတောင် နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ခြင်းအား အငြင်းပွားဖို့ လိုမည် မဟုတ်ဟုသာ ဆိုချင်ပါတော့သည်။ စဉ်းစား ကြည့်ကြပါကုန်…။
ဆရာမကြီး တွေးတောဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ သာဓက အနည်းငယ် ဖော်ပြလိုပါသည်။
သာသနာ့ အမွေ အမှန်တကယ် ကိန်းဝပ်စံပါယ်တော်မူသော သာသနာ့ အောင်မြေ အစစ်အမှန်ဖြစ်ပါက မည်သို့သော ပုထုဇဉ်ကမှ ဖျက်ဆီးပျောက်ကွယ်စေခြင်း မပြုနိုင်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငလျင် နှစ်ကြိမ် ရှေ့ဆင့် နောက်ဆင့် လှုပ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့် ပထမ အကြိမ်မှာ ရွှေတိဂုံစေတီတော်၏ ထီးတော်မြတ် တိမ်းစောင်း သွားခဲ့ပြီး နောက်တကြိမ် အလှုပ်တွင် အလိုအလျောက် ပြန်လည်တည့်မတ်သွားရသည့် ဖြစ်ရပ်မှာ ဒဏ္ဍာရီလာ ယုံတမ်း စကားမဟုတ်ပါ။ လွတ်လေပ်ရေးရပြီး ခေတ်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါသည်။ သွားလေသူ အာဏာရှင်ကြီး ဦးနေဝင်း လက်ထက်ဟု မှတ်သားဖူးပါသည်။
သာသနာ မကွယ်ပျောက်အောင်နှင့် တည့်တံ့ခိုင်မြဲ ပျံ့ပွားအောင် အဓိက ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်သည်မှာလည်း သာသနာ့အာဇာနည် အရိယာ အရှင် သူတော်စင်မြတ်များသာ ဖြစ်ကြောင်း အငြင်းပွားဖွယ် မရှိပါ။
တဖန် ကမ္ဘာသိ အထင်အရှား ဖြစ်သော အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်တည်ရှိရာအရပ်ကို ပျောက်ပျက်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပါကလည်း မြန်မာတမျိုးသားလုံး ခေါင်းငုံ့ခံနေမည် မဟုတ်ပါ။ သိဂုတ္တရတောင် မပြောနှင့် မန္တလေးတောင်ကိုပင် ဖျောက်ဖျက်ပစ်ဖို့ စဉ်းစားကြည့်ပါအုံး။ မြစ်ဆုံ ကိစ္စ အောင်ပွဲခံတာ ထိုအချက်ကြောင့် ဟု ယူဆပါသည်။
လက်ပံတောင်းအရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးရှုံးနစ်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော ဒေသခံ ပြည်သူလူထု တောင်းဆို ဆန္ဒပြကြတာကို စာနာမှု အပြည့်ဖြင့် ထောက်ခံပါသည်။ ထိုကိစ္စအတွက် အစိုးရနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီများက ဒေသခံ လူထု စိတ်ကျေနပ်မှု ရှိသည်အထိ ညှိနှိုင်း ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက် ပေးရမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် ထိုအရေးတွင် လူထုအပေါ် အတော်အတန် သြဇာ ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တဦးက မလျော်မကန် ဥပမာပြု အသုံးများဖြင့် ရေးသားဖော်ပြနေခြင်းမှာ အလွန်တရာ ရုပ်ဆိုးလွန်းလှသည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။
Posted By Blogger to လူဗိုလ်ဟူသည် ... at 3/25/2013 01:44:00 PM